Namuhla sizozama ukuthola indlela yokukhiya "Youtube" ingane. Lokhu kungenziwa ngezindlela ezahlukene. Kungcono ukuba banake indlela ngayinye. Phela, akekho ayivumeli 100% ukuze kuvikelwe izingane ekusebenzeni okuqukethwe okungalungile kunethiwekhi. Ngakho-ke kubalulekile ukuba baqonde ukuqaliswa ngamunye indlela kunokwenzeka. Akukona njengoba kunzima njengoba kungase kubonakale. Amathiphu aphambili futhi iseluleko sendlela ukuvikela ingane kusukela "Yutuba" aboniswa ngezansi. Ngisho novice umsebenzisi ungakwazi kahle kubo.
Indlela yokuqala eyenza ukusetshenziswa okuhlungayo ekhethekile "Yutuba". Akazange ivikela ngokugcwele izingane kusuka kuma-movie yokubuka. Kunalokho, phezu ukusingathwa kuhlanganisa ukuvikelwa isiqophi engadingeki ngobudala. Indlela enhle kakhulu ukuba bavikele izingane. Kodwa kanjani ukuvimba "Youtube" ingane kangcono? Ukuze wenze lokhu, kufanele wenze lokhu manipulations ezilandelayo:
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho kusayithi.
Skrolela ngezansi kwekhasi futhi uthole khona le "Imodi Safe".
Chofoza le nkinobho futhi hlola ibhokisi ukuze "On".
Chofoza "Khiya imodi yokuphepha".
Londoloza izinguquko ngokufaka iphasiwedi ye-akhawunti.
Yileyo indlela elula futhi okulula ngayo ukuqeda ingane extra yezinkinga zenethiwekhi ukuphepha. Ububi le ndlela itholakala lokuthi ukuthi ividiyo itholakale ivele abasebenzisi, futhi phakathi kwabo kukhona amavidiyo kuphela ngaphandle ukulinganiselwa. Le ndlela akubavikeli izingane kusukela ozimele engadingeki kunethiwekhi.
By endleleni, ukuthi ukhetho ukusebenza at 100%, ungakhohlwa ukucisha kungenzeka yangasese / ukuphequlula engaziwa kusiphequluli. Inqubo kuyodingeka ukuphinda zonke izinhlelo ekukhishweni kwakho Inthanethi ekhona. By the way, zonke izinyathelo ezingenhla kufanele benze okufanayo futhi. Indlela ezihlongozwayo sivumelekile ku isicelo, lapho yenziwe yasebenza. Indlela uvala "Youtube" ingane kangcono? Kukhona izindlela eziningana.
Ilokhi Okugcwele kukhompyutha
Noma iyiphi indawo ingacishwa ukubukwa ikhompyutha. Nokho, kuphela umshini othize. Ngakho-ke, uma une-PC amaningi, kuyodingeka ukuphinda inqubo ku ngamunye. Nokho, wena noma ingane yakho ngeke bakwazi ukusebenzisa "i-YouTube". Kodwa nganoma isiphi isikhathi umuntu onolwazi uyakwazi ukuze alungise leso simo. Indlela uvala "Youtube" wengane kukhompyutha ngokuphelele? Kukhona izinyathelo ezilula ezimbalwa endleleni eya lo mbono:
Iya "Computer yami."
Thola lapho C \_ Windows \_ System32 \_ abashayeli.
Kulesi folda, iya njll
Vula ifayela "incwajana" Sebawoti.
Bhala ekupheleni ovulekile idokhumenti umsebenzi: 127.0.0.1 www.youtube.com futhi 127.0.0.1 www.m.youtube.com.
Londoloza izinguquko zakho.
Ngokulandelana, manje zonke iziphequluli "Youtube" ongafuni ukusebenza. Futhi inguqulo yeselula, futhi evamile. Ukuze uphinde ukwazi ukufinyelela kwisayithi, udinga futhi uhlele Sebawoti. Kuyodinga 2 ukusula imisebenzi ebhaliwe ngaphambili. Akukho nzima. Ngakho-ke akuyona uhlakaniphile ikakhulukazi nabafundi namasu ungakwazi ukubhekana lesi simanga kulokhu kulandisa okubili. Le isixazululo akusho kakhulu ukugcina izingane.
Amaphilisi kanye amafoni
Vimba "Youtube" wengane ku "Android" noma yimuphi omunye igajethi kungaba ngezindlela eziningana. Khetha indlela efanele, ungakwazi ngumnikazi. Ngokuvamile, uma ingane isebenzisa Internet mobile, akanasabelo umqondo mayelana nendlela uvimbe amasayithi. Ngakho-ke, abazali bayakwazi ukusebenzisa ngempumelelo amanye amaqhinga. Okokuqala, kwi "Android", ungakwazi ukubamba ukhiye "Yutuba" nje kanye kukhompyutha yakho - kuhlanganise "Imodi ephephile". Okwesibili, Sebawoti kufayela ifayela lapha kakhulu khona. Ngakho-ke, kufanele sinake indlela manual ukukhipha indawo ngokuphelele.
iPad ne-hhayi kuphela
Kodwa akusho ukuthi lokhu ukuqeda izindlela kungenzeka. Uma ukucabanga nendlela ukuvimba "Youtube" ku wengane (iPad noma yimuphi omunye igajethi - akunandaba iyiphi), sebenzisa Antivirus ephathekayo. Manje izinhlelo eziningi ukuze kuvikeleke Imininingwane has a yokukhiya umsebenzi okhethekile. Ukufinyelela noma iyiphi iwebhusayithi ungaqedwa. Ukuze usebenzise le ndlela, kufanele ufake antivirus (kuvamise imali) yefoni yakho. Khona-ke uvakashele isigaba, olufana "I-URL-Hlunga". Lapha ungafaka ikheli "Yutuba" bese ugcine izinguquko. Ungakhohlwa mayelana version ephathekayo.
Manje ngiyaqonda ukuthi ukuvimba "Youtube" wengane kuthebulethi noma yimuphi omunye igajethi. Akukona njengoba kunzima njengoba kubonakala. Kodwa okokukhetha Akuwona kuphela. Kunezindlela eziningana ukukhiya. Nokho, bajwayele ngokuyinhloko amakhompyutha. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukusizakala blocker ekhethekile. Basuke esabekwa Izinsiza ngabanye, bese uvimbele laba amasayithi. Ngokwesibonelo, ifayela ephakwayo ngokwayo OpenDNS (evumelana yiliphi ithuluzi efanayo). Le software uphelele ukusetshenziswa ekhaya. Ukuze siphendule kanjani ukuvimba "Youtube" wengane, yenza okulandelayo:
Download and ufake OpenDNS.
Vula isiphequluli sakho futhi ulisebenzise ukuze uvule ukucushwa kwe imodemu yakho.
Ngena ngemvume izilungiselelo zesistimu.
Vakashela LAN iwindi evuliwe noma "Internet".
ukhetha Vula DNS amaseva e-DNS-izilungiselelo. Ukuze wenze lokhu, silobe: 208.67.222.222 futhi 208.67.220.220.
I Umbuso indawo efakwe, sicela uvakashele izilungiselelo ngaphansi "Phatha izizinda ngabanye" khetha "Youtube".
Kumagajethi iOS, ungasebenzisa enye indlela okuthakazelisa kakhulu ukuxazulula inkinga ngaphambi kwethu. Kukhona umsebenzi eyakhelwe ngaphakathi. Ibizwa ngokuthi - "Lock". Ukuze uyisebenzise, siqhubeka ngendlela elandelayo:
Igajethi, yiya engxenyeni ethi "Izilungiselelo" - "Okujwayelekile" - "Lock".
Khuphuka ukudayela ikhodi yokufinyelela (iphasiwedi) izindleko zokuhlinzwa kwakho.
Iya "okuqukethwe eziphambili".
Iya "Amasayithi" - "ukuvimba Njalo ..." bese ubhala lapha wonke amakheli "Yutuba".
Faka uqhwishi ebhokisini ukuze "Vimba amasayithi omdala."
Buyela top imenyu "Lock" bese kukhona ezengeziwe "Isethaphu Isicelo Khiya".
Uma une isicelo kwi "Yutuba", uyisuse.
Yilokho. Kodwa lena kuphela ohlelweni lokusebenza lwe-iOS. On the "Android" inketho okunjalo akukhona futhi awukwazi. Ngakho-ke, kukhona udinga ukusebenzisa izindlela ngalifunda.
Manje ngiyaqonda ukuthi ukuvimba "Youtube" ingane. Izibuyekezo abazali zibonisa ukuthi cishe kunoma iyiphi yezindlela ngenhla okulula udalula izingane zanamuhla. Ngakho-ke ngeke sikwazi ngokuqiniseka ukuthi Ukuvinjwa isayithi kuyokusiza ukuba uvikele izingane kusuka kuma-movie engadingeki.
Indlela ephumelela kakhulu iyona ukufakwa "Imodi ephephile", kanye ne-software ukusetshenziswa unqulo wesi arab ukuze lelisu imibono. Zonke manipulations ne ifayela Sebawoti manje seyaziwa ngisho nezingane. Ngakho-ke sethemba ukuthi umntwana kuyoba ephephile inethiwekhi, akudingekile. Uma wayefisa, ngeke ubambe ukuvula bese "zametet ulandelela" ngemuva. Ngakho-ke, lokho akusho uthola njalo ukuvinjelwa "Youtube" ukuba ibukwe. Ngiphakathi indlela akukuniki uyamethemba yokuthi ingane ingavumi ukundlula ohlelweni bese uyokwaneliswa ukuntuleka ukufinyelela ngobukhulu isiqophi ibamba.
Lapho Dormition Fast iqala: imithetho eyisisekelo inhlonipho
Yini izinkanyezi ezihlekisayo kithi? Ukuhambisana kwezinkanyezi kweCapricorn neTaurus